HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Arabo (Liban) Armenianina Asamey Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bichlamar Boligara Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Féroïen Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iban Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kachin Kamba Kantôney Nentim-paharazana Kekchi Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Luganda Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Masedonianina Maya Mooré Myama Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Nyungwe Nzema Oromo Ossète Ourdou Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi (Shahmukhi) Persianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Sinoa (Shanghaï) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tamoul Tatar Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Taïwan Tetun Dili Tiorka Tseky Tsonga Turkmène Twi Télougou Udmurt Umbundu Valencienne Venda Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Ny Baiboly ihany no milaza izay ilainao mba hahatakarana izay voalaza ao amin’izy io. Na manao ahoana na manao ahoana fahaizanao, dia “tsy sarotra loatra aminao” ny mahatakatra izay lazain’ny Baiboly.​—Deoteronomia 30:11.
Ireto avy no ilainao:
Mila manana toe-tsaina tsara. Ekeo hoe Tenin’Andriamanitra ny Baiboly. Manetre tena fa tsy tian’Andriamanitra ny olona manambony tena. (1 Tesalonianina 2:13; Jakoba 4:6) Aza minomino befahatany izay rehetra vakinao. Tian’Andriamanitra ‘hampiasa saina’ mantsy ianao.​—Romanina 12:1, 2.
Mivavaha mba hanana fahendrena. Hoy ny Ohabolana 3:5: “Aza miantehitra amin’ny fahaizanao.” Aleo kosa ‘tsy mitsahatra mangataka’ fahendrena amin’Andriamanitra, mba hahatakarana izay lazain’ny Baiboly.—Jakoba 1:5.
Mianara tsy tapaka. Be dia be kokoa ny soa horaisinao raha mianatra Baiboly tsy tapaka ianao fa tsy tsindraindray fotsiny.​—Josoa 1:8.
Ianaro isaky ny foto-kevitra ny Baiboly. Ho fantatrao izay ampianarin’ny Soratra Masina raha dinihinao isaky ny foto-kevitra izay voalaza ao. Atombohy amin’ny “abidim-pianarana” izany, ary avy eo ny “fampianarana sahaza ny olon-dehibe.” (Hebreo 6:1, 2, Dikan-teny Iombonana Eto Madagasikara) Afaka mampitaha andinin-teny ianao rehefa manao izany. Ho hitanao amin’izay fa ny andinin-teny ao ihany no manazava ny andinin-teny hafa, eny fa na dia ireo “saro-takarina” aza.​—2 Petera 3:16.
Mangataha fanampiana. Mampirisika antsika ny Baiboly mba hitady fanampiana any amin’izay efa mahatakatra ny Baiboly. (Asan’ny Apostoly 8:30, 31) Mampianatra Baiboly maimaim-poana ny Vavolombelon’i Jehovah, ary ny fomba fampianaran’ny Kristianina fahiny no arahin’izy ireo rehefa manao izany. Mampiasa boky ara-baiboly izy ireo mba hanampiana ny olona hahafantatra hoe inona marina no ampianarin’ny Baiboly.​—Asan’ny Apostoly 17:2, 3.
Ireto no tsy ilainao:
Fahaizana be. Nahatakatra ny Soratra Masina ny apostoly 12 sady afaka nampianatra ny hafa, na dia noheverin’ny olona hoe ‘tsy dia nahita fianarana sady olon-tsotra’ aza izy ireo.—Asan’ny Apostoly 4:13.
Vola. Tsy mila mandoa vola ianao dia efa mahalala izay lazain’ny Baiboly. Hoy mantsy i Jesosy tamin’ny mpianany: “Efa nahazo maimaim-poana ianareo, ka manomeza maimaim-poana.”​—Matio 10:8.
Iza no Afaka Manampy Anao?
Raha tena natao ho azon’ny olona izay voalaza ao amin’ny Baiboly, nahoana ianao no mbola mila olona hanampy anao hianatra azy io?
Hizara Hizara Inona avy no Ilainao mba Hahatakaranao Izay Lazain’ny Baiboly?
ijwbq no. 40
Famakiana Baiboly: Ahoana no Anombohako Azy?
Nahoana no Be dia Be ny Baiboly?